လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF 1200
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is the best solution for the bottled purified water companies in terms of water purification, fast water filling, ensuring exceptional quality.
Our machine is one of the specialized products for filling and capping and has been chosen byavariety of purified water bottling companies.
We are direct importer, distributor as well as manufacturer. Thus, our products always go directly to the customers with no intermediaries or intervening. That is the reason why the prices of jar filling and capping machine offered by Viet An is always much lower than other units. Our prices vary depending on capacity of the machines. These least repairable machines with remarkable durability shall help you quickly recover the initial capital after just 1 year.
Viet An ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင် တိုက်ရိုက်တင်ပို့ဖြန့်ချီပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်သလို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An ကုမ္ပဏီမှ စက်တွေက ဈေးနှုန်းချိုသာနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ ဈေးနှုန်းတွေက စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားပါတယ်။ ဒီပြုပြင်စရာနည်းပြီး ကြာရှည်အသုံးခံတဲ့စက်တွေက တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါ အရင်းငွေကို မြန်မြန်ပြန်ရစေမှာပါ။
Water is an indispensable source of energy for human beings in particular as well as plants and animals in general. Nowadays, along with improved living conditions in urban areas, the demand for water is also increasing. However, to ensure hygiene and safety, the bottled water needs to be completely purified and automatically filled and capped with VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine to buildaclosed loop manufacturing system and avoid microbial contamination, satisfying the standards given by the Ministry of Health.
ရေဆိုတာ လူတွေ၊အပင်တွေနဲ့ တိရိစ်ဆာန်တွေအတွက် မရှိအဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်အခါမှ မြို့ပြတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မားလာတဲ့အခါ ရေအပေါ်လည်း ပိုမိုမှီတည်လာရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့သောက်ရေတွေဟာ အပြည့်အဝ သန့်ရှင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီ ထုတ်တဲ့ စနစ် တည်ဆောက်ရန်၊ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ မပါစေရန်၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ညီစေရန်တို့အတွက် VAQGF 1200 စက်နဲ့ လောင်းထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ဖို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine system is automatically operated with3automatic steps as follows:
1. Automatic 5Gallon cleaning
Its is essential to thoroughly clean 5G jar (20L) before filling and capping process as this step will help to ensure scrupulous hygiene for the bottled water.
There areaconveyor system,asystem of 304 stainless steel jar holders and pressure booster pumps integrated into the washing unit.
The 20L jars without caps are transferred to the jar holder system by the operators. The conveyor belt operates through conveyor motor. The pure water with sterilized ozone will be sprayed into to thoroughly clean the jars. The jars are completely clean and sterile and transfered to the filling heads.
VAQGF 1200 စက်ရဲ့အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
လောင်းမဖြည့်ခင်နဲ့ အဖုံးမပိတ်ခင်မှာ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်က ရေဘူးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်မှာ 304 အစွန်းခံသံမဏိ ပုလင်းသယ်ယူပေးစက်နဲ့ ရေစုပ်စက်ကို သန့်ရှင်းရေးယူနစ်နဲ့ တွဲသုံးတဲ စနစ်ပါရှိပါတယ်။
အဖုံးမပါတဲ့ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို ပုလင်းတွေထားတဲ့နေရာဆီ ပို့ပေးရပါမယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သယ်ယူပေးတဲ့ ကိရိယာက အလုပ်လုပ်မယ်။ပုလင်းတွေကို ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ပုလင်းအတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းဖို့ ပုလင်းတွေကို ပိုးသတ်ပေးတဲ့ အိုဇုမ်းပါရှိတဲ့ ရေသန့်နဲ့ ဖြန်းမက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလင်းတွေက သန့်ရှင်း၍ ပိုးသတ်ပြီးသောအခါ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့နေရာကို ရွှေ့ရပါမယ်။
2. Automatic 5Gallon filling with pure water
The 20-liter jars, after being thoroughly cleaned in step 1, will be transfered to the filling heads. VAQGF1200 model enables filling 8 jars simultaneously thanks to 8 filling heads integrated. This improvement makes VAQGF1200 much more productive than previous3in 1 models.
VAQGF 900 စက်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၈ ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် VAQGF 1200 စက်ဟာ အရင်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်တွေထက် ပိုပြီး ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. Automatic 5Gallon capping
After being fully filled with water, the jars will be transferred to the capping heads for the third step. Automatic jar capping
The capping heads of VAQGF1200 are made of high quality 304 stainless steel and operate using thrust generated from the piston movement. The caps filled in the tray by the operators will be transfered to the cap head through the duct. The caps will be firmly capped onto the jars with the cap heads. The jars, after being capped, would be transferred to the next steps.
ရေဖြည့်ပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီစက်ခေါင်းတွေဟာ အရည်အသွေးမြင့် 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ပစတိုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေကနေ သယ်ယူလာပေးတဲ့ အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းကို ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆီသို့ ရွှေ့ပေးပါမယ်။အဖုံးတွေကို ပုလင်းအပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖုံးပိတ့ပြီးသားပုလင်းတွေကို နောက့ထပ်အဆင့်တွေဆီကို ရွှေ့ပြောင်းပေးရပါမယ်။
The3built-in automatic steps are operated through the smart control system integrated onto the machine body. There isaPLC touch screen integrated onto the control panel, showing the operating parameters of the machine. The buttons are used to control the machine functionalities. The customers can adjust speed of the machine with the buttons on the control panel. The maximum capacity of the machine is 1,200 20L jars per hour.
အဆင့် ၃ ခုဟာ စက်ရဲ့ကိုယ်ထည်မှာရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပြပေးတဲ့ PLC touch screen ပါရှိပါတယ်။ customer တွေက စက်ရဲ့အရှိန်ကို ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှာပါတဲ့ ခလုတ်တွေနဲ့ ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာပုလင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
With this VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine, the customers would be able to save 7-10 employees while still ensuring stable productivity. The machine is manufactured applying the most advanced technology of the United States with qualified and genuine material imported. Shelf life of the machine is more than 20 years
VAQGF 1200 စက်ရဲ့ သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတွေကြောင့် အလုပ်သမား ၇ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက် အထိ လျှော့ချနိုင်သလို ပစ္စည်းတွေများများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို U S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဒီစက်ရဲ့ သက်တမ်းကတော့ နှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
8 automatic steps can be integrated into the VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine.
Currently, the use of pure water bottles has become extremely popular, creating opportunities for bottled water manufacturers (20L jars) to invest heavily in production. After purchasing the jars, the manufacturers will clean them before reuse. The jars need to be decapped before being cleaned.
ယခုအခါမှာ ရေသန့်ဘူးအသုံးပြုမှုတွေ များပြားလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ပိုပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ပေးနေပါတယ်။ ပုလင်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်သူတွေက ပြန်အသုံးမပြုခင် သန့်ရှင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလင်းတွေက သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ခင် အဖုံးချွတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
BG-1200 automatic decapping machine will help you decap with the capacity of 1,200 caps per hour.
Operating the machine is extremely simple. What you need is justamachine connected to power supply. Next, transfer 20L jars to the2decapping heads. The caps will be automatically decapped then. The caps remain intact after being decapped and can be reused.
BG-1200 စက်က တစ်နာရီအတွင် အဖုံး ၁၂၀၀ ကို ချွတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီစက်ကို အသုံးပြုရမယ့်ပုံမှာလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာကတော့ စက်ကို ပါဝါအထောက်အပံ့နဲ့ ချိတ်ဆတ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကတော့ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို အဖုံးချွတ်ပေးတဲ့ဆီကို ရွှေ့ပေးရပါမယ်။ အဖုံးတွေက အော်တိုခွာပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။အဖုံးတွေက ပုံစံမပျက် ကျန်ရှိနေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(BG-1200 အော်တိုအဖုံးချွတ်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (cap/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 900-1200
Pressure (Mpa)( ဖိအား) 0.8-1.0
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 800x750x1800
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 120
ST-1200 automatic external jar washing machine can be used in the bottled water manufacturers. It is used to thoroughly clean the external jars before transferring them to VAQGF12003in-1 automatic washing, filling and capping machine.
With 8 filling heads integrated, this machine enables filling 8 jars simultaneously, improving productivity by removing human workforce.
ဒီစက်ကို ရေသန့်ဘူး ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီစက်ဟာ ပုလင်းတွေကို VAQGF 1200 စက်ဆီကို မရွှေ့ပြောင်းခင် ပုလင်းအပြင်ကို နှံ့စပ်စွာ ဆေးကြောပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၈ ခုပါတာကြောင့် ဒီစက်ဟာ ၈ ပုလင်းကို တစ်ချိန်တည်း ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့လုပ်အား မလိုဘဲ ပစ္စည်းတွေ များများ ထုတ်နိုင်တယ်။
(ST-1200 အော်တို ပုလင်းသန့်ရှင်းပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Cleaning head(သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 9
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 1.5
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 2000x800x1800
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 260
3. BL-1200 automatic jar loading machine
BL 1200 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်
Designed with 8 loading heads, enabling simultaneous loading of 8 heads into3in 1 machine, the BL-1200 automatic jar loading machine would help to automate manufacturing process with the capacity of up to 1,200 jars of 20L/hour. In addition, with high quality stainless steel material, the machine is of remarkable durability, easy to clean and absolutely safe.
သယ်ယူပေးတဲ့စက်ခေါင်း ၈ ခုရှိတာကြောင့် အဖုံး ၈ ခုကို တပြိုင်နက်3in 1 စက်ထဲကို ရွှေ့နိုင်တယ်။ဒီစက်က တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာ ပုလင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ရဲ့ အဖုံးတွေကို သယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီစက်ကို စစ်မှန်၍ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သန့်ရှင်းရလွယ်ကူပြီး လုံခြုံစေပါတယ်။
Technical specifications of BL-1200 automatic jar loading machine
(BL-1200 အော်တို ပုလင်းသယ်ယူပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 1200
Loading head (ပစ္စည်းသယ်သောခေါင်း) 8
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 2250x960x1200
With this CL-1200 automatic jar cap loading machine, the manufacturers will not have to concern about the caps being reversed during manufacturing process.
The machine is equipped with conveyor motor, conveyor belt, cap tray, air blowing and eye sensor system.
The machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the cap heads.
Despite the low cost of investment, this state-of-the-art machine will help the customers feel confident about quality of the jars that they would produce.
How to use Anomaly inspection machine (DJ-100)
The machine is used to inspect the jars after being produced atarandom rate of 3.5%.
After being randomly selected, the jars will be gone through DJ-100 anomaly inspection machine. With2lights integrated, the anomaly inspection machine will help the operators easily find the anomaly of the jars and reject unqualified jars.
ဒီစက်က ဈေးနည်းနည်းပဲ ပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီလုံးဝခေတ်မီတဲ့စက်က ဝယ်ယူသူတွေကို သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပုလင်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်မှုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်က ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို 3.5% စစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
ကျပန်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါ ပုလင်းတွေက DJ-100 စက်ကို ဖြတ်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ မီး ၂ ခုကြောင့် အော်ပရေတာတွေက ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လွယ်ကူစွာ စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
The machine is designed withaheating andashrinking chamber. After being covered with the polymer shrinking film by the operators, the jars will be gone through the heat shrinking chamber of the machine.
This is the most modern machine currently, applying heat from the thermal power to deform the membrane and make the jars complete wrapped with it.
With the application of modern technology, heat inside the chamber will be automatically adjusted. The heating chamber will help to maintain stable heat inside, thus remaining fast and even membrane shrinkage speed with fine quality.
ဒီစက်ကို အပူပေးခြင်းအကန့်နဲ့ ရှုံ့ခြင်းအကန့် တစ်ကန့်စီနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေက ပုလင်းတွေကို ပေါ်လီမာရှုံ့ပေးတဲ့ဖလင်တွေနဲ့ ဖုံးပြီးတဲ့အခါ ပုလင်းတွေက SK-1200 E စက်ကို ဖြတ်ရပါမယ်။ ဒီစက်က အပူစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး အလွှာကို ပုံစံပျက်စေကာ ပုလင်းမှာ ကပ်နေစေတဲ့အတွက် ခေတ်အမီဆုံး စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာကြောင့် အကန့်ထဲမှာရှိတဲ့အပူဟာ အော်တိုထိန်းညှိထားမှာ ဖြစ်တယ်။ အပူအကန့်က အတွင်းထဲက အပူကို တည်ငြိမ်စေပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့နှုန့းကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ မြန်စေမှာဖြစ်တယ်။
(SK-1200 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 900-1200
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 36
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 4300x650x1100
7. CSG-12 plastic conveyor
ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CGS-12
Designed with the size of 1.2m and width of 29cm, the plastic conveyor helps to transfer the empty jars quickly.
This conveyor consumes justalittle energy to operate and is easy to repair in case of mechanical broken. The cost of investment is low.
The operation capacity is high without making noises. Installation area and time to transfer the jars are remarkably saved.
The plastic conveyor is used to connect the decapping, external jar washing parts to VAQGF12003in 1 automatic filling and capping machine.
ဒီစက်ကို အလျား ၁.၂ စင်တီ၊အနံ ၂၉ စင်တီနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားတာကြောင့် ပုလင်းတွေကို မြန်မြန် သယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ဒီစက်က အင်နာဂျီ နည်းနည်းပဲ စားတဲ့အပြင် ပြင်ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အရင်းလည်း နည်းပါတယ်။
အသံတွေမဆူညံဘဲ လုပ်ဆောင်မှုလည်း မြင့်တယ်။ တပ်ဆင်တဲ့နေရာလည်း အများကြီးမလိုသလို အချိန်ကုန်လည်း သက်သာပါတယ်။
ဒီစက်ကို အဖုံးချွတ်ပေးသောစက်၊ပုလင်းအပြင်ဆေးပေးသောစက်တို့နဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။
Technical specifications of CSG-12 Stainless steel conveyor
(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-12 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 2* 0.75
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 12000x290
8. CSSG-11 Stainless steel conveyor (for jars containing water)
CSSG-11 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ
This conveyor is applied for manufacturing of bottled purified water.
It is used to transfer the 20L jars containing full of water.
With large load, high durability,
The conveyor works smoothly and does not make noise. It is capable of transferring jars in bulk, without taking too much installation area.
ဒီစက်ကို ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ရေအပြည့်ပါတဲ့ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တပ်ဆင်တဲ့နေရာ အများကြီးမလိုဘဲ ပုလင်းတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of CSSG-11 Stainless steel conveyor
( CSSG-11 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ)
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 1.1
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 11000x290
Application of VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200 ရဲ့ လုပ်ငန်းသုံးပရိုဂရမ်
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is manufactured applying the most advanced technology of the United States.
Quick filling process with3automatic steps
The filling capacity is up to 1,200 jars of 20L/hour.
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is made of 304 stainless steel, with extremely high durability material and 20 years of shelf life.
There isasmart control panel that automatically switches off when an incident arises
The installation process meets ISO: 9001- 9001 standard.
The closed automatic filling machine satisfies food hygiene and safety standards stipulated in National technical regulation No. 6-1:2010/BYT by the Ministry of Health.
It has compact design, matching industrial manufacturing requirements on space saving.
The machine runs stably, maximizing energy consumption.
The machine is warranted for 1 year under long-term maintenance
VAQGF 1200 စက်ကို U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းထည့်တဲ့နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။
လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့် ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာပုလင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ကိူ ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
ဒီစက်ကို 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ခုပြသနာပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းရပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာလည်း ပါဝင်တယ်။
ISO 9001 စံနှုန်းလည်း မီပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အမျိုးသားနည်းပညာစည်းမျဉ်း No.6-1:2010/BYT အရ အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုကလည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
VAQGF 1200 စက်ဟာ နေရာအများကြီး မရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
ဒီစက်က အင်နာဂျီသုံးစွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒီစက်က ကြာရှည်ခံတဲ့အပြင် တစ်နှစ် အာမခံ ဖြစ်ပါတယ်။
About Viet An General Trading Joint Stock Company - the company supplying VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
Viet An အထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီအကြောင်း- VACGF 12003in 1 ၅ ဂါလန် အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်
Viet An General Trading Joint Stock Company always put customers benefits first and pay special attention to product and service quality. Thus, after nearly 20 years of establishment and development, we have received many prestigious awards for our unceasing efforts.
Viet An ကုမ္ပဏီဟာ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အမြဲဦးစားပေးပါတယ်။ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အချင်းကိုလည်း အမြဲ စောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ရပ်တည်နိုင်ပြီး ဆုတွေလည်း အများကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်တာ ဖြစ်တယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆုများသည် Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Gold Medal Vietnam High Quality Goods in 2009. Golden Lotus Vietnam High Quality Goods in 2009. Leading brand in Vietnam in 2015. Representing 100 small and medium enterprises to meet President Truong Tan Sang in 2016. Be voted to be in the top 10 best brands of3regions in 2017 Being recognized by Viet Nam Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection (VATAP) for actively participating in the movement. Representing 100 small and medium enterprises to meet President Tran Dai Quang in 2017.
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆု၊
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက် ရွှေကြာတံဆိပ်ဆု၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်တွင် ဦးဆောင်နေသော ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Truong Tan Sang ကို တွေ့ဆိုရန် လုပ်ငန်းအလယ်အလတ်နှင့် လုပ်ငန်းအသေး ၁၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခြင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဒေသ ၃ ခု၌ အကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် ၁၀ ခုတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ Viet An မဗ ပစ္စည်းအတုတွေမသုံးဘဲ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ကာကွယ်ခြင်း(VATAP) အသိအမှတ်ပြု ခံရခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Truong Tan Sang ကို တွေ့ဆိုရန် လုပ်ငန်းအလယ်အလတ်နှင့် လုပ်ငန်းအသေး ၁၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခြင်း
Some cups that Viet An has won
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is one of the products of us that is highly appreciated by customers, withacapacity of 1200 jars per hour. This product has helped bottled water manufacturers effectively address production limitations and satisfy requirements on food safety and hygiene for bottled water.
Contact us now if you are in need ofaVAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine. Your inquiries would be promptly and adequately resolved. Call us at: +84 839 31 31 31 .
VAQGF 1200 စက်ဟာ ဝယ်ယူသူတွေအလွန်အသိအမှတ်ပြုကြတဲ့စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ဟာ ရေသန့်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အစားအသောက်ရဲ့ သန့်ရှင်းလုံခြုံပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုကို သေချာစေပါတယ်။ VAQGF 1200 စက်ကို ဝယ်ယူချင်ရင်
+84 839 31 31 31 ကို ဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။
VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine High Quality Products - Advanced Technology - The Cheapest Price!
VAQGF 1200 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်-အရည်အသွေးမြင့်တယ်၊ကြာရှည်အသုံးခံတယ်၊အဆင့်မြင့်နာ်းပညာကိုအသုံးပြုထားတယ်၊ဈေးနှုန်းလည်း ချိုသာတယ်။
Technical specifications of VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
A. VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine - A MUST -BUY ITEM
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200-ဝယ်ယူသင့်သော ပစ္စည်း)
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 1100-1200
Extraction head(ထုတ်ယူသောခေါင်း) 8
Capacity (KW)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 23
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 5200x2600x2400
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 3500
Characteristic(လက္ခဏာ) Heating water to 60°C
B. VAQGF 12003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine , OPTIONAL STAGES
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200-ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်နိုင်သော အဆင့်များ)
(BL 1200 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်)
( မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက် DJ-100)
(SK-1200 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-12)
8. CSSG-11 Stainless steel conveyor
(for jars containing water)( CSSG-11 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ)
Hỏi đáp & đánh giá3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200